Yeyiphi impembelelo enayo i-Zodiac Elements yaseTshayina kuthi? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwaseNtshona kunezinto ezi-4 ezihambelanayo kunye nezinye kunye nokuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina kwelinye icala kunezinto ezi-5 amandla azo ahambelanayo. Kweli candelo lithile lokuvumisa ngeenkwenkwezi, sibhekisa kuMthi, uMlilo, iMetal, Amanzi kunye noMhlaba kwaye nganye nganye ihambelana nomqondiso apho ziphefumlela khona kwaye zinefuthe. Ke, ngaphandle kokuqhubeka, masifumanise ifuthe abanalo kuwe, ubuntu bakho kunye nendlela yakho yobomi.
Yintoni into yam yesiTshayina?
Ukutya kwengqondo: Umthi wondla uMlilo, ochumisa uMhlaba, ovelisa iMetal, ethi ityebise Amanzi kwaye yona yondle uMthi. Into nganye iqhagamshelwe, inegalelo kwintlalo-ntle yabanye kwaye iphembelela ubuntu bophawu lwakho lwaseTshayina ngokobume bamandla ayo.
Leliphi iqela le element ndingowalo?
Akukho nto inokuba lula njengokusebenzela iqela lakho. Into nganye inxulunyaniswe ne inombolo, edityaniswe kwi unyaka wokuzalwa kwakho. Umzekelo:
Unyaka wakho wokuzalwa uphela nge 0 okanye Nye: ungu Isinyithi
Unyaka wakho wokuzalwa uphela nge Mbini okanye 3: ungu Amanzi
Unyaka wakho wokuzalwa uphela nge 4 okanye 5: ungu Iinkuni
Unyaka wakho wokuzalwa uphela nge 6 okanye 7: ungu Umlilo
Unyaka wakho wokuzalwa uphela nge 8 okanye 9: ungu Umhlaba
> Funda eyakho I-horoscope yaseTshayina ngo-2021 Apha!<
Izinto zaseTshayina kunye nempembelelo yazo kuthi
Ngamagama amathathu Ukuzingca, ubulungisa, ukuzimisela
Umbala ohambelanayo Mhlophe
Inombolo yethamsanqa 9
Inqaku elinovakalelo Imiphunga
Kuthatha amandla ukwenza yonke iminqweno yakho ibe yinyaniso! Ubeka yonke into ukuze ufezekise iinjongo ozibekele yona. Ukukhulula akukho mbuzo kuwe! Nokuba imeko ithini na, uhlala unyanisekile kwimilinganiselo yakho kwaye ungazivumeli ukuba uphenjelelwe nangayiphi na indlela. Lumka, kuba ukuqina kuya kuba sisiphako xa kuthe kwabakho ukuthatheka...
Ngobuchule, unobunzima ekunikezeni abanye umsebenzi, kodwa akuyi kuba buhlungu. Ubuthuntu bakho ingqondo ingazuza ngokuvula, njengoko ukujongana neengcinga ezahlukeneyo kuya kuyiphazamisa imbono yakho.
Umntu onothando ocinezelekileyo, ulungiselela uthando kodwa ungaluvumi ngenxa yokoyika ukubonakala usengozini... Uyayazi indlela yokubonakalisa kwaye qaqambisa iitalente zeqabane lakho. Nangona, qiniseka ukuba xa sele ukwindawo ebonakalayo, iqabane lakho alikusitheli kakhulu!
Ngamagama amathathu Uneentloni, unovelwano, unovelwano
Umbala ohambelanayo Mnyama
Inombolo yethamsanqa 6
Inqaku elinovakalelo Izintso
Uyayazi indlela yokunxibelelana kunye nokwakha ubudlelwane ngokukhawuleza ukufaka ukuthembana nokuzithemba. Yintoni enokuba yinto eqhelekileyo kuwe kunokuphulaphula abanye? Uqaphele kakhulu, intuition yakho ayilunganga kwaye ikuvumela ukuba wazi ukuba ujongene nabani. Ukuba ubungenazintloni kangako kwaye ungakhuselekanga, iimvakalelo zakho bezingayi kuthinteleka!
Ukwenza emthunzini kumnandi ngakumbi kunokukhokela iqela. Ngaphandle koko, imali ayilogunya lakho. Umnqweno wakho kukuphumelela ebomini.
Uqala ngenkolelo yokuba unobomi obunye kuphela kwaye unikezela obakho kwabo bakungqongileyo. Usapho lwakho kunye neqabane lakho beza kuqala!
Ngamagama amathathu Ukudala, amabhongo, nentliziyo efudumeleyo
Umbala ohambelanayo Luhlaza
Inombolo yethamsanqa 8
Inqaku elinovakalelo Isibindi
Ngaba uthabatha inyathelo lokuqala? Uyayazi indlela yokwenza! Awukhe uswele iimbono okanye amandla. Le nkuthazo imangalisayo inokuvakala kwindlela oqhuba ngayo zonke iiprojekthi zakho. Wena, ukhukhumele? Hayi, ngamabhongo nje. Uyakwazi ukwenza zingqonge abantu abalungileyo kwaye ukufumana ukuthenjwa kwabo bawela indlela yakho ngumdlalo wabantwana kuba unovelwano kakhulu.
Amandla akho adumileyo ahamba nawe ukuya eofisini yakho! Amaqela, imisebenzi kunye nemali, ulawula yonke into ngobuchule.
Thatha ixesha lokuba hlaziya iibhetri zakho neqabane lakho, awuyi kuzisola ngokufudumala okuthuthuzelayo kweengalo zabo ... Ngaphambi kokushiya kwakhona ngesitayela!
Ngamagama amathathu Ukuzithemba, ukuphelelwa ngumonde, ububele
Umbala ohambelanayo Bomvu
Inombolo yethamsanqa 7
Inqaku elinovakalelo Intliziyo
Ukuba yinto yomlilo, ufudumeza umoya, uvuselele amandla kunye ukwazi ukugcina ilangatye lomnqweno liphila. Ushukunyiswe yincasa yekamva kunye nomdla onamandla wokwazi, ufuna ukubona nokufunda yonke into. Ukulawula kunye nokukhanya kukwayinxalenye yeminqweno yakho, kodwa lumka ungahambi wedwa kwizinto. Funda iimpawu zokuthobeka kwaye uhlale uhoye iimfuno zakho.
Kufuneka kuthiwe uyayazi indlela yokukhuthaza imikhosi yakho! Uyayazi indlela yokubenza basebenze nzima. Kulumkele ukuzithemba ngokugqithiseleyo oko ngamanye amaxesha kukukhokelela ekubeni wenze ngokungacinganga, ngokuchukumisa ukuzingca.
Ukulungelelana yeyona nto iqaqamba kakhulu kubuntu bakho. Ukuthanda utshintshiselwano lwexesha elide. Ubushushu bothando bungcono kunomlilo wenkanuko!
Ngamagama amathathu Lucid, ukucinga, ukuzola
Umbala ohambelanayo Lubhelu
Inombolo yethamsanqa 5
Inqaku elinovakalelo Udakada
Ukonwabela? Awunaxesha laloo nto. Ungqongqo kwaye uqeqeshekile, ukuqonda kwakho okusebenzayo kukukhokelela ngqo kwinqanaba. Kuwe, akukho ngxaki, zizisombululo kuphela. Ulumkile kwaye iimvakalelo zakho zibukhali kakhulu ... Kwanele ukufikelela usukelo lwakho ngokuqinisekileyo!
Nangona i-perspicacity yakho isebenzela izinto zakho eziphathekayo, ukuswela kwakho ukucinga ihlala ikholisa ukukhawulela intsimi yakho yesenzo. Emsebenzini nasebomini, ungathanda ukuyidlala ngokukhuselekileyo kunokungcakaza ngethamsanqa.
Kubudlelwane, uhlala ungena kwindawo eqhelekileyo emva kokuvavanya iimvakalelo zeqabane lakho. Ulwalamano lwakho aluyi kusebenza ngaphandle kokuthembana, ukunyaniseka nokunyaniseka. Indlela eqhelekileyo ayikoyiki, ngokuchaseneyo ufumana induduzo enkulu kuyo ... Kodwa ungalibali ukuvuselela i-spark xa ifuneka!
Qikelela isini somntwana wakho usebenzisa iKhalenda yoQembu lwaseTshayina